ALL FRIEND's WELCOME To My Blog: JOKES
Afteralong career of being blasted intoanet, the human cannonball was tired. He told the circus owner he was going to retire.
ခန္စာတစ်ခုပဲ ရှိတယ် .......
Blog Archive September 2018 (1) February 2013 (1) October 2010 (1) June 2010 (4) April 2010 (1) December 2009 (2) November 2009 (1) October 2009 (4) September 2009 (1) June 2009 (10) May 2009 (7) April 2009 (9) March 2009 (14) February 2009 (18) January 2009 (36) December 2008 (21) November 2008 (24) October 2008 (32) September 2008 (40) August 2008 (39) July 2008 (38) June 2008 (37) May 2008 (35) April 2008 (40) March 2008 (23) February 2008 (17) January 2008 (35) December 2007 (3) November 2007 (42) October 2007 (15)
** ဘလော့ခ် မိတ်ဆွေများ ** (ကို) သီဟသစ် (ကို) အောင်မျိုးမြင့် (ကို) သော် (ကို) ကျော်သက်လတ် (Republic) (ကို) ထိုက် (ကို) ပြည့်စုံ (ကို) လူလ (ကို) ရန်အောင် (ကို) ချမ်းမြစိုး (ကို) စိုင်းခန်းထွန်း (ကို) သတိုးရာဇာ (ကို) သားဖြိုး (ကို) ထူးတေဇာ (ကို) သက်ထူး (eye) (ကို) လင်းလင်း (ကို) မောင်မျိုး (ကို) ရဲကြီး (ကို) မီးပြတိုက် (ကို) ကိုမိုးပြေ (ကို) ဂျွန် (ကို) ဗီလိန် (ကို) ဒိုပတ်စ် (ကို) ပီကေ (ကို) welcome (ကို) ဖိုးဂျယ် (ကို) မင်းကျော် (ကို) သက်နောင် (ကို) မောင်ထင် (ကို) မိုးပြာ (ညီ) မြတ်သူဟိန်း (ကို) မြိတ်သားလေး (ကို) စိုးသူဟိန်း (ကို) မျက်လုံး (ကို) ယိမ်းနွဲ့ပါး (ကို) ကျော်လွင်ထွန်း (ကို) အရုပ်ကလေး (ကို) ဂလိုဘယ် (ကို) နံနက်ခင်းကဗျာ (ကို) ရဲ (ကို) ဇေယျာ (ကို) နဗန (ကို) ဂစ်တာ (ကို) လင်းဦး (စိတ်ပညာ) (ကို) ပုလုကွေး (ကို) မိုးဝေ (idea) (ကို) ဒီကိုလာ (ကို) နွေသူရ (ကို) ညခင်းရဲ့လမင်း (ကို) စီမီဂိုး (ကို) ကနေဒါ (ကို) စိုင်းရှင်ရဲထွဋ် (ကို) ဖြိုးစံ (ကို) မြစ်ကျိုးအင်း (ကို) ဖြိုးငယ် (ကို) ရွှေအောင် (ကို) ရဲဝင့်သူ (ကို) ရင်နော်ခင်လေးငယ် (ကို) နေလင်း (ကို) ထိုက်မင်း (ကို) မင်းကျန်စစ် (ကို) ဂျူလိုင်ဒရင်း (ကို) အောင်မျိုးဟန် (ကို) ဟန်သစ်ငြိမ် (ကို) သင်ကာ (ကို) မောင်လှ (ကို) ချမ်းမြစိုး (ကို) နေမင်းသံစဉ် (ကို) ညီလင်းဆင့်
** ဘလော့ခ် မမများ ** (မ) လင်းလင်း (မ) ယမင်း (မ) ဇာ (မ) လတ် (မ) မေဒီဇာ (မ) ၀ှိုက် (မ) မီးမီးငယ် (မ) မြတ်သွယ် (မ) ဖူးဖူး (မ) မီလေးဇာ (မ) ဝေလေး (မ) မယ်လိုဒီမောင် (မ) ရွှေပြည်သူ (မ) နှင်းပွင့်ဖြူလေး (မ) မီဂူမိ (မ) သွန်းသွန်း (မ) ၀ါဝါခိုင်မင်း (မ) မက်မက် (မ) လင်း (မ) ပန်းခရေ (မ) ခင်ဦးမေ (မ) မယ်လိုဒီမွန် (မ) ငုငယ်မိုး (မ) အလွမ်းပြေ (မ) လမင်းခင်ခင် (မ) ယုံကလေး (မ) chos (မ) သင်ဇာ (မ) ငွေလမင်း (မ) စုသက်လင်း (မ) ခေါင်ခေါင်
** နည်းပညာ ဘလော့ခ်များ ** (ကို) ရန်အောင် (ကို) မနောသား (ကို) မြတ် (ကို) ကိုမင်းကျော် (ကို) ကိုဖြိုး (ကို) ထူးတေဇာ (ကို) Orgee (mm) helpdesk (e) english4success (ကို) ပီကေ (ကို) သံလုံငယ် (mmhelper) (ကို) စေတန်ဂေါ့ (ကို) itmen (ကို) Trojan (ကို) ဇော်မင်းတင် (ကို) ITmgmg (ကို) ပြည်စုံ (ကို) မိုးပြေ (engineersformm) (ကို) ဇော်လေး (ကို) လင်းစတာ (ကို) kyawnuz (ကို) azure_phoeniz (ကို) လင်းစနေ (engineer4mm) (servena)
2009 Thingyan (2)
Flower Horn Fish (3)
Football Focus (6)
Fwd Email (3)
Mathematical Question (2)
My Ideology (8)
My Posting (19)
Myanmar Unicode (1)
Own Tune (25)
Start Year (1)
မျှဝေခြင်း၊ မြန်မာဟာသ (5)
သည်းခံပေးပါ world financial crisis (1)
အွန်လိုင်း လူရွှင်တော် (1)
We Love The Freedom Of The Software.
Test living without zawgyi font on Ubuntu
Aye Myat Myat Ko, Ever Green Sky !
Changing my Address!
ကဗျာချစ်သူ (Poem Lover)
Belongings of missthonnthonn !!
New Myanmar Football Website
Myanmar Liverpool FC FUN
Totally Visiting Country
ALL FRIEND's WELCOME To My Blog. Powered by Blogger - BlackSplat design by SamK.